Maxaa looga baahan yahay xildhibaannada soo socda? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa looga baahan yahay xildhibaannada soo socda?
Ergooyinka soo dooranaya xildhibaannada ku soo bixi doona doorashooyinka dadban ee dalku aaday, ayaa lagula dardaarmayaa soo xulidda Baarlamaan tayo leh oo ka soo bixi kara masuuliyaddoda.
GAROWE, Soomaaliya - Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid ‘Juxa’ ayaa dardaaran u diray ergooyinka soo dooranaya Xildhibaannada Dowladda Fadaraalka doorashada foodda nagu soo heysa.
Wasiir Juxa, oo Lix qodob ku soo koobay shuruudaha looga baahan yahay xildhibaanka Federaalka ee dalka, dadka iyo degaanka matalaya afarta sano ee soo aaddan ayaa yiri;
“Waa inuu ahaadaa Xildhibaan si gaar ah u metela dad, dan iyo deegaan-doorashadiisa ee aan cirka heehaabin oo ku gabban ereyo maran iyo wadaniyad foodsaar ah”.
“Xildhibaan kuu maqan ee aan adiga kugu maqnayn oo u qareema inaad hesho biyo nadiif ah, waxbarasho tayo leh, caafimaad iyo amni”.
“Xildhibaan og in Golaha uu ka tirsan yahay ee xeer-dejinta shaqadiisa ugu muhiimsani inay tahay ilaalinta sharciga, inuu ka madax-bannaan yahay Golaha xukuumadda iyo inaan habeenkii faq wax loogu sheegin oo aan hadba dhinac gacanta u taagin”.
“Xildhibaan aan si gaar ah ugu xirrayn Oday iyo koox danleey gaar ah, kuna shaqayn "dhuudhuhayn iyo dhabar-xoq" joogto ah”.
“Xildhibaan leh aragti siyaasi ah, qiyam qofnimo, dareen dan guud iyo bareere fagaare iman kara”.
“Xildhibaan marka muddo-xileedkiisu dhamaado dadkii uu metelayey la hor iman kara wax La' arki karo, la fahmi karo oo looga garaabi karo. Xildhibaan berri raad reebi kara oo bogga taariikhda geli kara”.
Xildhibaanku waa shaqsiga kaliya ee shacabku doorto, waana qasab in qof qaan gaar siyaasadeed ah, ka bixi kara masuulidda saaran loo diro golaha, si uu maqaamkiisa iyo mataladdiisa labadaba uga soo dhalaalo.
Xildhibaanku waa sharci dajiye, iyo la xisaabtame, hay’adaha kale ee dowladda, gaar ahaa Laanta Fulinta ‘Xukuumadda’ Baarlamaanka soo socda, waa in laga fakaro ka hor inta aan la soo dooran, si aysan u noqon kuwa la mid ah Golahii Shacabka ee waqtigu ka dhamaaday, ee lagu suntay magaca ‘Golahii Sacabka’.